Amaloota Galmee Hundataa
Yommuu galmee hundataa maxxansituu, qabeentootni gariin galmeewwanii huundi, kasaalee, fi barrruu galchitee kamiyyuu ni maxxanfamu.
Gariin galmeewwan huundaaf gabatee qabeentoota fi kasaalee galmee hundataa keessatti uumuu dandeessa.
Akkaataaleen gariin galmeewwan keessatti fayyadamnu,akka akkataalee keewwata haaraa keessatti, ofumaan galmee hundataa keessatti naqa.
Yommuu galmee hundataa ilaaltu, akkaataaleen dura galmee hundataa keessatti argame akkaataalee isa gariingalmeen galfamee irra dursi kennama.
Jijjiramni yoo galmee hundataa irra ga'e gariin galmeewwanii ciruma hin jijjiiramu.
yommuu galmee galmee hundataatti dabaltu ykn gariin galmee haaraa uumtu,geessituun galmee hundataa keessatti ni uumaamti. Galmee hundataa keessatti qabiyyee gariin galmee kallattiin gulaaluu hin dandeessu, garuu naanneessaa gulaallii gariin galmee kammiyyuuf fayyadamuu dandeessa.
Fakkeenya akkaataalee fayyadamuu
Galmee hundataa master.odm barruu ta'ee of keessatti qabata akkasumaas gariin galmeewwanii sub1.odt fi sub2.odt walqunnamsiisa.Tokko tokkoo gariin galmeewwanitti akkaataaleen kewwata haaraa maqaa wal fakkaataa akkaataa1 jedhu waliin hiikamuun itti fayyadama, akkaasumaas gariin galmee olkaa'ama.
Yommuu galmee hundataa olkeessu,akkaataaleen gariin galmee keessaa garagalmee hundataatti naqama. Jalqaba,Akkaataaleen haaraa akkaataa1 sub2.comii keessaa ni galfama. Itti ansuun, akkaataaleen haaraa kan sub2.odt keessaa ni galfama, garuu akkaataa1 yoo galmee hundataa keessa ta'ee, akkaataaleen kun kan sub2.odt keessaa hin galfamu.
Galmee hundataa keessatti amma akkaataa haaraa kan akkaataa1 gariin galmee ni argita.Gariin galmee jalqabaa amaloota akkaataa1 fayyadamuun akkaataaleen kewwataa kan galmee hundataa keessaa hundii ni agarsiifamu.Haata'uu malee, ofiin gariin galmee lammataa hin jijjiiramu. Akka miseensa galmee guddaa ykn sub2.odt ofuuman of baneetti irratti hundaa'uun, amaloota gara biraa fayyadamun gariin galmee lammataa akkaataa kewwatoota ni agarsiisa,
Jaanjawa ittisuuf, galmee hundataa fi gariin galmeewwanitiif qajojii galmee fayyadami. Kun kan uumamuu ofumaan Yommuu galmee duraan mata dureewwan kee keessaa galmee hundataa fi gariin galmeee isaa yommuu ofumaan rawwatuu dha, ajaja Fayilii - Eergi - Galmee Hundataa Uumi fayyadami.
Title is: Galmee Hundataa fi Gariigalmeewwanii